ယခု CBD ထုတ်ကုန်ရှိနိုင်, 7-Eleven ဆိုင်များတွင်ထောင်ပေါင်းများစွာ၏ထဲမှာ
ဒီနှစ်ကုန် CBD ထုတ်ကုန်ကမ်းလှမ်းမတိုင်မီစူပါမားကတ် US မှာ, 7-Eleven go.
ထိုအလွယ်တကူ cannabidiol များအတွက်ခေတ်ရေစီးကြောင်းအောင်မြင်မှုများကိုခေါ်နိုင်ပါသည်, ကွင်းဆက်ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးစတိုးဆိုင်အရေအတွက်၏စည်းကမ်းချက်များ၌သောကွောငျ့ - 7-Eleven စမက်ဒေါ်နယ်ရဲ့ထက်ပိုဆိုင်များတွင်ရှိပါတယ်!
CBD ထုတ်လုပ်သူအဘို့, Mega သဘောတူညီမှုရ
7-က Eleven သင်အဲလ်ဘတ် Heijn နှင့်ဂျမ်ဘိုနှင့်အတူနှိုင်းယှဉ်နိုင်, ဒါကြောင့်ကြီးမားတဲ့နှင့်သြဇာကို USA တွင် '' အဆင်ပြေစတိုးဆိုင် '' ၏ကွင်းဆက်ဖြစ်ပါသည်.
အများစုမှာဆိုင်များလည်းအခြားများမှာ 24/7 ပွင့်လင်းနှင့်သူတို့နေဆဲဇာတိမြေ America မှာကယ်တင် 17 အခြားနိုင်ငံများ, ဂျပန်အပါအဝင်, မက္ကစီကို, သြစတြေးလျနှင့်တရုတ်.
Begin januari telde de keten in totaal liefst 64.319 vestigingen, ဒါကြောင့်လွယ်လွယ်ကူကူ, 7-Eleven CBD ထုတ်ကုန်များရောင်းချမှုနှင့်အတူယခုနှစ်စတင်မယ့်အဓိကအောင်မြင်မှုများကိုခေါ်နိုင်ပါသည်.
CBD ရေနံကိုဝယ်? အဆိုပါ CBD စျေးဆိုင်စာမျက်နှာသို့သွားရောက်.
Het gaat specifiek om de CBD-producten van ဖီးနစ်မျက်ရည်, တည်ရှိသောကုမ္ပဏီ - ဘယ်လိုမဟုတ်ရင်ဖြစ်နိုင်ပါတယ် - ကော်လိုရာဒို.
ဖီးနစ်မျက်ရည်ကတည်းက CBD စျေးကွက်အတွင်းဦးဆောင်ကုမ္ပဏီများသည်တဦးအဖြစ်ယူဆခြင်းနှင့်ဖြစ်ပါသည် 2010 cannabidiol ထုတ်ကုန်သုတေသနပြုခြင်းနှင့်ထုတ်လုပ်ခြင်းအတွက်စေ့စပ်
ထိုအတောအတွင်းအချို့ရှိခဲ့သည် 140 (!) စျေးကွက်အပေါ်ကွဲပြားခြားနားသောဖော်မြူလာ.
လျှော်ခြင်းနှင့် CBD-ကြွယ်ဝသောမဟုတ်ဆေးခြောက်ကနေဖန်ဆင်းတော်သူတို့၏ထုတ်ကုန်များ၏စကားမစပ်, အားလုံး.
Vooralsnog gaat de uitrol van hun CBD-producten in de 7-Elevens met name focussen op de staten Nevada, ကော်လိုရာဒို, မက်ဆာချူးဆက်, အီလီနွိုက်, မေရီလန်း, ဝါရှင်တန်, DC က, ဖလော်ရီဒါနှင့်ကယ်လီဖိုးနီးယား, aldus အဆိုပါသတင်းထုတ်ပြန်ချက် dat dinsdag de deal wereldkundig maakte.
ထိုမကုန်မီစားသုံးသူကိုဆိုလိုသည် 2018 CBD သည်အနည်းဆုံးဆည်းပူးနိုင်ပါတယ် 4.500 7-က Eleven စတိုးဆိုင်, ထက်ပိုပြီးမှသုံးနှစ်အတွင်းထတဲ့အရေအတွက်က 7.000 လွယ်ကူခြင်းစျေးကွက်.
'' CBD nu ခေတ်ရေစီးကြောင်းဖြစ်ပါတယ် ''
"ကျနော်တို့ကဖီးနစ်အမေရိကန်လူမျိုးသန်းပေါင်းများစွာမှထုတ်ကုန်လိမ့်မယ်နျးပဲ, 7-Eleven ကြောင့်စိတ်လှုပ်ရှားနေကြသည်, ဒီသက်သက်သာသဘာဝအထဲကနေအကြိုးပွုနိုငျ, ဘေးကင်းလုံခြုံခြင်းနှင့်သက်သေပြအခြားရွေးချယ်စရာကျန်းမာရေး '', zegt oprichter Janet Rosendahl-Sweeney van het CBD-merk.
"ရမညျထည့်သွင်း; ဤသည်သဘောတူညီချက်ဟာခေတ်ရေစီးကြောင်းကျန်းမာ option ကိုအဖြစ် CBD ၏ status ရှိကွောငျးကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ချက်အတည်ပြု.
ကျနော်တို့ထိရောက်သောတစ်ခေတ်သစ်သို့ပြောင်းရွှေ့ရန်စိတ်အားထက်သန်နေကြသည်, ဘက်စုံနှင့်လျှော်-based ဖြည့်စွက်ဒေသခံအဆင်ပြေစတိုးဆိုင်များတွင်ယခုအလွယ်တကူမရရှိနိုင်ပါ။ "
ရှေ့ဆက်စီးပွားရေးမဂ္ဂဇင်း Forbes မဂ္ဂဇင်းက, CBD စျေးကွက်၏အဆိုအရလည်းရွှေကြိမ်: တွင် 2020 ထက်မနည်းသောအရာ 700 ရာခိုင်နှုန်းခန့်တိုးလာ!
CBD ရေနံဝယ်ယူ? ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့လိပ်စာများကိုကြည့်ပါ.
CBDOlieVoordelen.nl မူလစာမျက်နှာ | CBD ရေနံ Stores | အတွေ့အကြုံများ | CBD ရေနံလမ်းညွှန်
Categories CBD Olie NieuwsTags7Eleven, acheter l'huile cbd, cannabidiol, cbd olie, cbd olie kopen, cbd olie kopen belgie, cbd olie winkels, Forbes, ဖီးနစ်မျက်ရည်	Post navigation
7-Eleven စစူပါမားကတ်ထောင်ပေါင်းများစွာ၏အတွင်း CBD ကုန်ပစ္စည်းများယခုရရှိနိုင်